Nitsidika ny minisitry ny fizahantany ny kaomisera ambony kanadiana ao Jamaika
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Jamaika » Nitsidika ny minisitry ny fizahantany ny kaomisera ambony kanadiana ao Jamaika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • Tourism • Travel Wire News
Fitsidihana am-panajana any Jamaika
Minisitry ny fizahantany ao Jamaika, Hon. Edmund Bartlett, hita eo ankavanan'ny sary, dia manatevin-daharana ny Kaomisera Avo Kanadiana any Jamaika, ny Excellency Emina Tudakovic (eo afovoany) ary ny sekretera maharitra ao amin'ny minisiteran'ny fizahantany, Jennifer Griffith, rehefa miato amin'ny solomaso izy ireo nandritra ny fanajana farany teo antso nataon'ny Kaomisera Avo ao amin'ny biraon'ny New Kingston an'ny Minisitra.
Eo amin'ny latabatra misy ny fifanakalozan-kevitra dia fomba ahafahan'i Jamaika sy Kanada manohy miara-miasa amin'ireo faritra toa ny fizahantany.
Ny sehatry ny fizahantany dia manome motera fitomboana ho an'ny toekarena Jamaikana.
Ilaina ny fiaraha-miasa matotra eo amin'ny sehatra miankina sy tsy miankina hanatratrarana tanjona kendrena, ivon'ny drafitry ny ministeran'ny fizahantany.
Niditra amina adihevitra be momba ny fiovan'ny indostrian'ny fizahan-tany izy ireo taorian'ny fihanaky ny valanaretina COVID-19, ary koa ny fomba ahafahan'ny Jamaica sy Kanada manohy miara-miasa amin'ireo faritra toa ny fizahantany.
The Ministeran'ny fizahantany any Jamaika ary ny masoivohony dia manao iraka hanatsara sy hanova ny vokatra fizahan-tany ao Jamaika, sady manome antoka fa ny tombony azo avy amin'ny sehatry ny fizahantany dia ampitomboina ho an'ny Jamaikana rehetra. Noho izany antony izany dia nampihatra ny politika sy paikady izay hanomezana vahana ny fizahan-tany ho motera fitomboana ho an'ny ny toekarena Jamaikana. Ny Minisitera dia tapa-kevitra hatrany hanome antoka fa ny sehatry ny fizahan-tany dia manome ny anjara birikiny farany amin'ny fampivoarana ara-toekarena an'i Jamaika raha manana ny fahafaha-mahazo azy mihoa-pampana.